Madaxweyne Qoorqoor “Waa nalagu khasbay colaadda Guriceel” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Madaxweyne Qoorqoor “Waa nalagu khasbay colaadda Guriceel”
Madaxweynaha ayaa sheegay in colaadda ka hor ay isku dayeen inay arrintani ku xaliyaan wada hadal, balse ay dadaaladoodaasi ka socon waayeen dhanka Ahlu Sunna, oo uu ku eedeeyay inay qabsatay Guriceel, ka dibna ay fariisimo ciidan ka sameysatay.
Sida uu sheegay Madaxweynaha waxa uu dagaalkani ahaa mid lagu khasbay Galmudug, si maamulku u ilaaliyo wadajirkiisa iyo amnigiisaba.
“Mowqifka Dowladda Galmudug horena waa u caddaa, haddana waa cad yahay, waxaad la socotaan 22 berri inay fadhiyeen kooxdaas hubeysan ee duulaanka soo qaaday, Degmada Guriceel-na ay qabsadeen. Waxaan intaa u gudbinaynay, ka codsanaynay, jiho kasta u marinaynay inay ka baxaan Degmada Guriceel, dadkana u daayaan nabadooda, xasilloonidooda iyo dowladnimadooda. Wixii ay qabaan oo tabasho ahna ay si nabad ah ku sheegtaan, oo joojiyaan qoriga iyo xoogga, taas bedelkeedii waxay qaateen inay dhufeysyo iyo xeryo ciidan ka dhigtaan Degmada Guriceel, ayna qorsheeyaan inay qabsadaan deegaano cusub oo hadda xasilloon.” Ayuu yiri Madaxweynaha Galmudug.
Madaxweynaha ayaa yiri “Dowladda Galmudug waxay ku khasbanaatay markii aysan wax istaajineynin dhibaatadooda inay is difaacdo, taas-na Dowladda Galmudug, shacabkeeda iyo dadkeedee ku matashaa, maxaa yeelay waxay duulaan ku yihiin dowladnimadooda, nabadooda, cadaaladooda, sharcigooda iyo wadajirkooda.”
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in dad isugu jira Soomaali iyo ajaaniiba ay ku lug leeyihiin colaadda Guriceel, walow aanu dadkaasi carab dhabin, balse ay waqtigeeda sheegi doonaan, sida uu yiri.
Madaxweyne Qoorqoor oo soo hadalqaaday xaaladda nololeed ee dadka ku barakacay colaadda Guriceel ayaa tilmaamay in guddi ka tirsan Golihiisa Wasiirada iyo Maamulka Guriceel loo magacaabay wixii gurmad ah, ee ay Galmudug awooddo inay la gaaraan dadkaasi, waxaana uu ku baaqay dadka reer Galmudug dal iyo dibadba inay dadkaasi maatida ah u gurmadaan. Sidoo kale Dowladda Federaalka iyo Hay’adaha Caalamiga ayuu ugu baaqay inay gacan ka gaystaan wax ka qabashada xaaladda bani’aadanimo ee ka jirta Guriceel.
Previous articleGudoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka oo gaaray Baydhabo
Next articleRa’iisal Wasaare Rooble oo kormeeray Taliska NISA (SAWIRRO)